Maxay tahay sababtii uu taageeraha ugu soo dhex orday garoonka ciyaartii xalay Barcelona ay garaacay Real Mallorca xilli taageere la’aan la ciyaarayay - Barwaaqo TV - Warbaahinta Bulshada Horumarkeeda
Maxay tahay sababtii uu taageeraha ugu soo dhex orday garoonka ciyaartii xalay Barcelona ay garaacay Real Mallorca xilli taageere la’aan la ciyaarayay
By admin June 14, 2020 248
(Spain) 14 Juun 2020. Xilli garoonka lagu ciyaarayay laga mamnuucay inay soo galaan wax taageere ah, si loo xakameeyo inuu cudurka coronavirus ku dhex faafo dadweynaha , ayaa misena waxaa garoonka soo galay wiil taageere ah oo dhallin yar.
Lama oga qaabka ay ugu suuro gashay inuu wiilka taageeraha ah uu soo galo garoonka, misena uu ugu soo tallaabay halkii lagu ciyaaryay.
Wiilka dhallinyarada ah ayaa xirnaa funaanadda xulka qaranka Argentina oo uu dhabarka kaga qoran yahay magaca Messi, waxaana uu isku dayay inuu sawir soo jeed ah (Selfie) uu la galo kabtanka Barcelona ee Lionel Messi.
Kaamirooyinka garoonka ayaa laga weeciyay taageerahan dhallinyarada ee daqiiqaddii 53-aad garoonka soo galay, balse waxaa durba qabtay kooxda nabad gelyada garoonka oo xirnaa maaskarooyinka af-xirka.
Si kastaba ha ahaatee, isku daygii wiilka taageeraha ah ee ahaa inuu isla sawirro Lionel Messi ayaanan suuro galin, waxaana kooxda nabad gelyada ay ku guuleysteen inay goor hore xakameeyaan oo ay garoonka ka saaraan.
Messi ayaa bandhig qurux badan la soo laabtay ciyaartii Barcelona ay xalay kaga adkaatay Real Mallorca natiijo 4-0 ah, isagoo labo gool caawiyay, sidoo kalena gool ku soo xiray guushii weyneyd.
Arturo Vidal, Martin Braithwaite iyo Jordi Alba ayaa sidoo kale shabaqa kubadda soo taabsiiyay, xilli Luis Suarez uu u soo laabtay Barca kaddib dhaawacii soo gaaray horraantii sanadkan, waxaana uu caawiye ka ahaa goolkii ugu dambeeyay ciyaarta ee Lionel Messi dhaliyay.
Muwaadin Soomaaliyeed oo lagu dilay Magaalada Capetown ee dalka Koofur Afrika.
Horudhac: Manchester United vs Granada… (Xaqiiqooyinka aad uga baahan tahay inaad ka ogaato kulanka caawa ka dhacaya Old Trafford)
Miyeey Man United u tartami kartaa hanashada Premier League? Tababare Solskjær ayaa ka jawaabaya
Maxaa ka cusub heshiiska ay kooxda Real Madrid ku dooneysay Kylian Mbappé??